इन्टरनेट यौनको डरलाग्दो कुलत : दशौँ वर्षको जेलजीवनले पनि रोकेन कुकर्म !
डी म्याकम्ब/लिन्डसे ह्वाइटहर्स्ट
२o७५ कार्तिक ८ बिहीबार
साल्ट लेक सिटी, अमेरिका / अमेरिकाको उटाह विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत एक छात्रालाई गोली हानी हत्या गरेका एक व्यभिचारी व्यक्तिको विगतका निजी विवरणहरुको खुलासाले सबैलाई आश्चर्यमा पारेको छ । यौन शोषणका लागि महिलालाई ललाइफकाइ जालमा पार्ने ती व्यक्तिले दशौं वर्ष जेलमा बसेपनि त्यस्तै कुकर्म नछाडेको पाइएको छ ।
“उनी अत्यन्तै योग्य, इमान्दार थिइन्, हामीले वास्तवमै एक असल साथी गुमाएका छौं,” विडलले भने ।
उटाह फुटबल टिमले समेत यस साता म्याक–क्लस्कीको सम्झनामा हातमा कालोपट्टी बाँधेर खेल्ने जनाएको छ ।
टेलिकमले इन्टरनेटको शुल्क नबढाउने
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले इन्टरनेटको शुल्क नबढाउने भएको छ । सरकारले साउन १ गतेदेखि लागुहुने गरि इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने निर्णय गरेको भए पनि टेलिकमले ग्राहकको सुविधा
दुई दिन हिडेर फोन र इन्टरनेट !
जाजरकोट । मुड्केचुला गाउँपालिका–८ डोल्पा सर्मीका दीर्घ शाहीले पत्रकारिता गर्न थालेको अहिले आठ वर्ष नाघ्यो । उनी बस्ने गाउँमा इन्टरनेट त परै जाओस् फोनले समेत काम नगर्दा दिनदिनै समस्या भोग्दै
क्लासिक टेकको बुलेट-जी इन्टरनेट प्लान सार्वजनिक
काठमाडौँ । ईन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने कम्पनी क्लासिक टेकले ईन्टरनेटको बढ्दो गतिको मागलाई ध्यानमा राख्दै यस कम्पनीले बजारमा ४०, ५० तथा ६५ एमबीपीएसका प्लानहरु बजारमा ल्याएको छ । यस कम्पनीले ४०
सरकारद्वारा पब्जी खेलमा प्रतिबन्ध, के हो पब्जी खेल ?
काठमाडौँ । सरकारले नेपालमा इन्टरनेटबाट खेलिने अहिलेको चर्चित खेल पब्जी खेलमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । नेपाल दूरञ्चार प्राधिकरणका सूचना अधिकारी तथा उपनिर्देशक सन्दिप अधिकारीले खरीबोटसँग कुरा गर्दै पब्जी बन्द गर्न सर्कुलर
अमेरिकाले मेक्सिको सीमामा थप सैनिक परिचालन गर्ने
भारतले चन्द्रयान सोमबार प्रक्षेपण गर्ने
जोखिमबाट फर्केका किशोरी तालीमबाट बने स्वरोजगार
दाङमा १० हजार हेक्टर वन थप
विराटनगर दुर्घटनामा दुईको मृत्यु
डिएपी मल आभाव हुँदा किसान मारमा